एक वर्षमा २ लाख ३० हजारलाई सेवा, पछिल्लो ५ महिनामा आमूल सुधार, ‘रेफर’को बाध्यता हट्दै – Health Post Nepal
२०७६ पुष २२ गते १८:४९
मुलुकको एक मात्र सरकारी केन्द्रीय बाल अस्पताल कान्तिले स्थापनाको ५८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसर मंगलबार कान्ति बाल अस्पतालले अफ्नै प्रांगणमा समारोहको आयोजना गरी आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो ।
अस्पतालले आव ०७५/७६ मा कुल १ लाख ७५ हजार बालबालिकालाई ओपिडी सेवा प्रदान गरेको छ । गत आवमा अस्पतालबाट ५५ हजारले आकस्मिक सेवा लिएका छन् । यीमध्ये २० हजारलाई अस्पतालले शल्यक्रियासेवा प्रदान गरेको छ । यो वर्षको अवधिमा १० हजार बालबालिकाले कान्तिमा भर्ना भएर उपचार गराएको अस्पतालको तथ्यांक छ । अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाका अनुसार कान्तिमा प्रत्येक वर्ष बिरामीको चाप १० देखि १२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । चालू आवको ५ महिनामा अस्पतालले ७५ हजारलाई ओपिडीसेवा दिइसकेको छ । यसबीचमा २७ हजारले कान्तिबाट आकस्मिक सेवा लिइसकेका छन् ।
सरकारले आव ०७५÷७६ मा कान्तिलाई कुल २२ करोड बजेट उपलब्ध गराएकोमा ९८ प्रतिशत खर्च भएको अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले बताए । डा. बिच्छाले नेतृत्व सम्हालेपछि अस्पतालको सेवाप्रवाहमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अस्पतालको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएपछि पछिल्लो ५ महिनाको अवधिमा जनशक्ति तथा बेडको व्यवस्थापन गरी ६० देखि ७० प्रतिशत रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । केही समयमा बेड तथा जनशक्ति अभावमा बिरामी रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता पूर्णतः हट्ने विश्वास निर्देशक डा. बिच्छाको छ । यसका साथै अस्पतालमा २४ घण्टै बल्ड बैंक सञ्चालन, अक्सिजन प्लान्टका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता, सिटी–स्क्यान मेसिन सञ्चालन गरिएको डा. बिच्छाले जानकारी दिए ।
‘२ महिनाअघि १० शय्याको इन्टरमेडिएट केयर युनिट स्थापना गरिएपछि कान्ति आएका करिब ७० प्रतिशत बालकालिकालाई निजी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ डा. बिच्छाले भने, ‘अब कुनै अभिभावकले कान्तिमा बेड नपाएर निजी अस्पताल धाउनुपर्नेछैन ।’
कान्तिले अहिले २४ घण्टे सिटी–स्क्यान सेवा सुरु गरेको छ । अस्पतालले २ सिफ्टमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अबको १ वर्षभित्र करिब ५० जना क्षमताको कुरुवाघर निर्माण गर्ने योजना अस्पतालले बनाएको छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर नक्सा पाससमेत भइसकेको डा. बिच्छाले जनाकारी दिए । आफूले कान्ति सम्हालेको ५ महिनाको अवधिमा अस्पताललाई हेर्ने आमदृष्टिकोण राम्रो भएको डा. बिच्छाको दाबी छ ।
अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व सुधार गरी सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य सुधार गरेका डा. बिच्छासामु जनशक्ति अभावले अझै चुनौती दिइरहेको छ । जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालको सेवा थप बढाउन नसकेको भन्दै उनले २० जना मेडिकल अफिसर र ३० जना स्टाफ नर्स तत्कालै उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वस्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले चिकित्सकहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्न सके मात्रै सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए । ‘डाक्टरले डाक्टरका निम्ति आचारसंहिता बनाएर के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको श्वेतपत्र जारी भयो भने सरकारी अस्पताल सुधार्न सकिन्छ,’ मन्त्री ढकालले भने ।
सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले कमिसन बुझेर बिरामीलाई काजमा निजीमा पठाउँछन् : मन्त्री ढकाल
अस्पतालका जिम्मेवार कर्मचारी, एम्बुलेन्सचालक र ट्याक्सीचालकको मिलेमतोमा बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाएर कमिसन बुझ्ने गरेको पाइएको मन्त्री ढकालले बताए । ‘धेरै अस्पतालमा बिरामीहरू सुरुमा सरकारीमा आउँछन् । बीचको अवधिमा काजमा बाहिर जान्छन् । फेरि सरकारीमै आउँछन् भन्ने कुरा सुनेको छ,’ व्यंगमिश्रित भाषामा मन्त्री ढकालले भने, ‘जिम्मेवार कर्मचारी, एम्बुलेन्सचालक र ट्याक्सी चालकसम्मको मिलेमतोमा बिरामी सरकारीबाट अन्यत्र पुर्याइन्छन् र त्यसबापत कमिसन लिइन्छ । बिरामी त्यहीँ थलापर्छ । अन्तिममा केही पार नलागेपछि फेरि बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमै काज फिर्ता गराउँछन् ।’
सरकारले पठाएको डाक्टरले सरकारी अस्पतालमा खटाएको ठाउँमा काम गर्ने हो भने डाक्टरको अभाव नहुँने मन्त्री ढकालले बताए । गाह्रो परेका वेला नै सरकारको आवश्यकता पर्ने बताउँदै मन्त्री ढकालले कान्ति बाल अस्पताललाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।